Frantsa: Vonona handray filoham-pirenena mainty hoditra ve? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2008 13:55 GMT
Vakio amin'ny teny polski, বাংলা, Français, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Eny tokoa, ny ampitson'ny nahalany ny filoham-pirenena faha-44 n'i Etazonia, dia nahita ny mponina ao aminy ho maro kolontsaina, na ny marina kokoa dia maro foko i Frantsa. Toa nahatsiaro tena izy fa misy koa ny Frantsay “miloko” (atao tsy amim-pireharehana) ary ny tena loza anatin'izany misy ny Mainty na metisy.
Tsia, manitatra kely aho izany. Indraindray mba mahatsiaro ny zavamisy ao aminy ihany i Frantsa. Rehefa misy ny fotoan-dehibe (fandresena manantantara, fahatsiarovana na fahafatesana olomalaza ohatra. Ny olana dia tsy maharitra izany ary miverina haingana ho vahiny na mpifindra monina ( mpisolo vaika ny akalana eritrereto eto hoe mpangalatra, mpanararaotra amin'ny lafiny rehetra, maka ny asan'ny “tena Frantsay mpifoha maraina”) indray ry “zareo” ,.
Tsy dia manantena loatra izany ny vahinin'ny bolongan'i Alain Mabanckou Eugene Ebode. Tsy itokisany ny fihetsiky ny Frantsay manoloana ny fahasamihafana, ka tononiny amin'izany ny fitsontsoriky ny fankasitrahana ireo olona politikan'ny “fahasamihafana” tahaka ny Minisitry ny Zon'olombelona, Rama Yade (Senegaly fihaviana) sy ny Minisitry ny Fitsarana, Rachida Dati (Maraokana fihaviana).
Mialy Andriamananjara koa nandray anjara tamin'ny fanoratana ity lahatsoratra ity